ဟုတ်ကဲ့...အားလုံးပဲ..အားမနာတမ်း (အ၀) သုံးဆောင်ကြပါရှင်း)
(သာမီးစံ..ဘာလို့..ဒီလောက်ရက်ရောနေ ပါလိမ့်နော် ?..) :P
ဒီ့အတွက်လည်း..အတိုင်းမသိ.. ၀မ်းသာမိပါတယ်ရှင်...း)။
နောက်တော့..သူငယ်ချင်းကို..လိုက်ပို့ပါတယ်.. (ဘိုးဘွားရိပ်သား)
( ရာထူးတွေက..နည်းနည်းနောနောပဲနော်း)
သျှင်နေမင်း November 5, 2011 at 10:54 PM
မွေးနေ့ မှစ၍ နှောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
မိမိကိုယ်တန်ဖိုးထား လေးစာမြတ်နိုးတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ တွေ့ ပါစေ..:p
Anonymous November 6, 2011 at 2:13 AM
လမင်းငယ် November 6, 2011 at 7:54 AM
လမင်းငယ် November 6, 2011 at 7:56 AM
အ၀စားသွားတယ်နော် စိတ်ကူနဲ့:)
မောင်ဘုန်း November 6, 2011 at 12:23 PM
အပျိုကြီးရေ ... အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားပြီနော် ....
အဟီး ... အများကြီးမတွေး မနေနဲ့ တော့လေ ...
ကယ် ... ယနေ့ မှ စလို့နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ
သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝ တစ်ခု အမြဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ 
jasmine(တောင်ကြီး) November 6, 2011 at 1:26 PM
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့အတူ
မိသားစုတွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာသောဘ၀လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 6, 2011 at 1:56 PM
သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ ၄၀ကျော်မှ အပျိုကြီးလို့သတ်မှတ်တာ(ဘာ ဘယ်တိုင်းပြည်လဲ မမေးနဲ့နော် ဟီး မသိဘူး)ဒီတော့ သမီးစံလဲ ၄၀ကျော်မှ အပျိုကြီးလို့ ခေါ်တာခံ
ခေါ်တဲ့သူရှိရင် အကိုတော်ကို တိုင်ပြောနော် စတာပါ
၂၅နှစ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်မှု့တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့
အကိုတော်နဲ့ ယောင်းယောင်း မဒမ်လွင်ပြင်က ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကွယ်
မြတ်ကြည် November 6, 2011 at 2:20 PM
သမီးစံ ရေ ...ဆောရီးပါ အရမ်းနောက်ကျမှ ရောက်လာတယ်..ကားတွေကြပ်လို့ပါကွယ်..း)
အောင်မင်းဦး November 6, 2011 at 6:30 PM
အင်း စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ ရောက်ချလာတာ ပဲဗျာ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 6, 2011 at 7:46 PM
ဒီနေ့ဒီရက်ကစ နေ့ရက်တိုင်း ပျော်ရွှင်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး
မိဘကျေးဇူကို အထူးသိတတ်ပေးဆပ်နိုင်သော ချစ်စရာသမီးကောင်းလေး ဖြစ်ပါစေ...
ဆုတောင်းပေးပြီးပြီမို့ သမီးစံပေးထားတဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေထဲက ၂၀တန်တစ်ရွက် ကားခ ယူသွားမယ်နော်..
၂၀တန်ကား ရှိရောရှိသေးရဲ့လား မသိ.. :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 6, 2011 at 7:47 PM
ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ပဲအပေးလွန်ပြီး ရေထဲလည်း ပြုတ်ကျနေဦးမယ်
Mishell November 6, 2011 at 8:24 PM
ဇော်သိင်္ခ November 6, 2011 at 9:10 PM
အော်... ဘာလိုလိုနဲ့ သမီးစံတောင် အသက်တစ်နှစ်ကြီးလို့ အပျိုကြီး ဘဝထဲ ကူးပြောင်းတော့မှာနော်.. :P
ဂိုက်ပေးတော့ အတော်ကျန်းတဲ့သမီးပဲနော်. :P
သမီးစံ ကျွေးထားတဲ့မုန့်တွေက ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် တကယ်လဲ စားရဘူး... ။ အပြင်မှာပဲ တကယ်စားချင်တာ အဲဒီမုန့်တွေကို။ :)
ထာဝရပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ပေါင်းမြောက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် သမီးရေ....
san htun November 6, 2011 at 11:13 PM
mstint November 6, 2011 at 11:15 PM
သမံစီးလေးရေ မွေးနေ့ရက်မြတ်မင်္ဂလာနေ့လေးကစလို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ပါစေကွယ်။
စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြ ချမ်းသာသုခနဲ့ပြည့်ပါစေလို့ ထပ်လောင်းဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်နော်။
Thandar Lwin November 7, 2011 at 9:05 AM
မမ ကမွေးနေ့ ကိုနောက်ကျပြီးမှ ရောက်တော့ မစားရတော့ဘူးပေါ့။
မမ နဲ့ ဘလော့ဂါတို့ ရဲ့ ချစ်သမီးစံလေး မွေးနေ့ မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျန်ကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်း သာ သာ နဲ့ ချစ်သော သူများနှင့်အတူ ဘ၀ ကို အေးချမ်းသာယာစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ။
ကောင်းသော လိုရာဆန္ဒများ နဲ့ ပြည့်စုံပါစေ လို့ မမ ကဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် ။
8Yar November 7, 2011 at 5:28 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 7, 2011 at 7:57 PM
ပျော်ရ်ွဖွယ်မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေး ဖြစ်ပါစေ သမီးစံ..:)
rose November 8, 2011 at 2:00 AM
Su Yee November 8, 2011 at 11:57 AM
လွမ်းပိုင်ရှင် November 8, 2011 at 7:44 PM
နှမတော်က အကိုတော်ကိုမပြောပါလား အလာနောက်ကျတော့
မမ ဂျက်တို့ ဆာမောင်တို့ ၀ါးးးးထားတာ ပန်းကန်ပဲဆေးလိုက်ရတယ် ဟွန့် အိုက်တိုးပကေးစံပေး
ချယ်ရီမြေ November 8, 2011 at 7:56 PM
မျက်နှာလိုက်တယ်ဗျာ.. ဘလော့ဂါတွေဧည့်ခံတာ အများကြီးပဲ။ ဘုန်းဘုန်းတွေကျတော့ ဘာမှမကပ်ဘူး။
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော၊ ယဉ်ကျေးလိမ်မာသော၊ လူကြီးမိဘ ဆရာသမားကို ရိုသေလေးစားသော၊ ပွင့်လင်းရိုးသားသော သမီးအလိမ်မာလေးတစ်ယောက် မွေးနေ့မှသည် ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက် သွားတိုင်းရောက် ထိုးတိုင်းပေါက်(ထီ/ချဲ) ၀တ်တိုင်းယဉ် ဆင်တိုင်းလှပြီး တွေ့သူတိုင်းက ချစ်ခင်နိုင်ပါစေကွယ်.. ပါစေကွယ်.
ချယ်ရီမြေ November 8, 2011 at 8:01 PM
မွေးနေ့က ဧည့်ခံထားတွေများလှချည်လား။ ဘုန်းဘုန်းတွေကျတော့ ဘာမှမကပ်ဘူးပေါ့။
ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော၊ လူကြီးမိဘ ဆရာသမားစကားနားထောင်သော၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးသော၊ ပွင့်လင်းဖော်ရွေသော မွေးနေ့ရှင်သမီးအလိမ္မာလေး မွေးနေ့မှသည် ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်၊ သွားတိုင်းရောက် ထိုးတိုင်းပေါက် (ထီ/ချဲ) ၀တ်တိုင်းယဉ် ဆင်တိုင်းလှပြီး တွေ့သူတိုင်းကလဲ ချစ်ခင်နိုင်ပါစေ...။ .... ပါစေဟု..
ညီရဲ November 9, 2011 at 10:33 AM
happy birthday ပါ ညီမရေ...
နောက်ကျမှ မွေးနေ့ ဆုတောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ညီမရေ...
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) November 9, 2011 at 9:22 PM
မွေးနေ့ကိုး။ သိတောင် မသ်ိလိုက်ဘူး။
ဒါနဲ့ ဓါတ်ပုံက ဘယ်မင်းသမီး ဓါတ်ပုံ ကူးပြီးတင်ထားလဲ မသိ။း))
နောက်မွေးနေ့တွေမှာလဲ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ များများ ကျွေးနိုင်ပါစေ။
အပျိုကြီးဘ၀မှလဲ ကျွတ်လွတ်နိုင်ပါစေ။း)